January 21, 2020 - Hargeele - Wararka Somali State
Cayaaraha January 21, 2020
(World) 21 Jan 2020. Oscar waxa uu ahaa laacibkii cajiibka ah ee kooxda kubadda Chelsea, balse waqtiyo oo kaliya ayuu ahaa xiddig sameyn leh, maadaama hadda dadka qaar aysan ogayn halka uu ku dambeeyo. Waxa aynu warbxintaan idin kugu soo gudbin doonnaa waxa ku dhacay dheemankii reer Barazil ee Oscar, kaasoo taageeryaasha kubadda cagta qaarkood […]Sii akhriso
A foundation for ‘safe motherhood’ created with and for the Somali community – UW News
Somali News January 21, 2020
A foundation for ‘safe motherhood’ created with and for the Somali community UW NewsSii akhriso
(London) 22 Jan 2020. Kooxaha Chelsea iyo Arsenal ayaa dhibcaha ku qeybsaday kulankii adkaa ee London derby, kaddib markii ay ku kala baxeen bar-bardhac 2-2 ah, xilli ciyaartaan ay qeyb ka aheyd kulamada 24-aad ee horyaalka horyaalka Premier League. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 1-0 ay ku hoggaamineysay kooxda Chelsea. Daqiiqadii 26-aad xiddiga […]Sii akhriso
(Sheffield) 22 Jan 2020. Manchester City ayaa guul dirqi ah ka soo gaartay kooxda Sheffield United oo ay ku booqatay garoonka Bramall Lane, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 0-1, ciyaar ka tirsaneyd kulamada 24-aad ee horyaalka horyaalka Premier League. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray bar-bardhac 0-0 ah. Qeybta labaad marka dib leysugu […]Sii akhriso
Ethiopia News January 21, 2020
Death toll up to 10 in Ethiopia platform collapse; 250 hurt The Associated Press Several killed in Ethiopia stand collapse BBC News Ethiopia: Orthodox Christians celebrate epiphany Anadolu Agency 3 dead, more than 100 hurt after wooden stand collapses during ceremony in Ethiopia Global News Toll hits 10 in Ethiopia platform collapse The Cairns Post View full coverage Sii akhriso
(Yurub) 21 Jan 2020. Kooxda hogaamineysa horyaalka Spain iyo kooxda ugu guulaha badan horyaalka England ayaa waxa ay markan ku tartamayaan saxiixa ciyaaryahanka AC Milan ee Krzysztof Piatek. Wargeyska caanka ah ee ka soo baxa gudaha wadanka Spain “Mundo Deportivo” ayaa shaaca ka qaaday in Barcelona ay diyaar u tahay la soo wareegidda xiddiga ka tirsan […]Sii akhriso
Lionel Messi oo hoggaaminaya liiska xiddigo muhiim ah ay Bracelona nasineyso kulanka Copa del Rey
(Barcelona) 21 Jan 2020. Macalin Quique Setién ayaa shaaciyey liiska xiddigaha Barcelona ee kaga qeyb geli doono tartanka Copa del Rey. Barcelona ayaa isku diyaarineysa kulanka Copa del Rey ay habeen dambe booqan doonto kooxda yar ee UD Ibiza, iyadoo macalin Quique Setién uu kulankan nasiyay xiddigo badan ee muhiim ah. Haddaba xiddigaha Lionel Messi, Gerard […]Sii akhriso
(Africa) 21 Jan 2020. Isku aadka wareega labaad isreeb-reebka CAF FIFA World Cup 2022 ayaa lagu qabtay magaalada Cairo ee wadanka Massar, iyadoo Nigeria, Ghana & Egypt ay ku beegmeen xulal kale. Isku geen 54 dal oo African ah ayaa ka qeyb qaadan doono isreeb-reebka Koobka adduunka Qatar ee 2022-ka, laakiin kaliya 5 ka mid ah […]Sii akhriso
(London) 21 Jan 2020. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ah oo ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha Chelsea Iyo Arsenal kulanka goor dhow soo gali doona ee horyaalka Premier League. Hadaba dhanka hoose kaga boggo Shaxda rasmiga ah ee Chelsea Iyo Arsenal: Chelsea XI: Arsenal: XI: Gool FM.Sii akhriso
(London) 21 Jan 2020. Kooxda ka dhisan waqooyiga magaalada London ee Arsenal ayaa ku fikireysa in qaab amaah ay ku soo qaadato daafaca Bayern Munich ee Jerome Boateng. Hogaamiyaha Gunners ee Mikel Arteta ayaa waxaa aad u xadidan lacagaha uu ku garash gareynayo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee bishan Janaayo, iyadoo 31-sano jirka Germnay ee Boateng […]Sii akhriso